Noocyada weelasha qashinka: sifooyinka iyo qashinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Noocyada weelasha qashinka
Jarmal Portillo | 13/05/2021 10:00 | Dib u warshadaynta
Si loo yareeyo saameynta isbedelka cimilada iyo isticmaalka saxda ah iyo isticmaalka alaabta ceeriin, dib u warshadeynta ayaa loo isticmaalaa. Waa mid ka mid ah aaladaha ugu dhow ee ay tahay in dhammaan muwaaddiniintu u adeegsadaan yareynta saameynta deegaanka. Intaa waxaa dheer, waxaan si wanaagsan u maamuli karnaa kheyraadka dabiiciga ah ee jira iyo alaabta ceyriinka ah. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood way adkaan kartaa in si habboon dib loogu warshadeeyo. Tan waxaa jira waxyaabo kala duwan noocyada weelasha qashinka halkaas oo lagu xareeyo dhammaan qashinka aan ka soo saarayno guryaheenna.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa waxa ay yihiin noocyada kala duwan ee weelasha qashinka iyo waxa kasta oo loogu talagalay.
1 Dib-u-warshadaynta guriga
2 Noocyada weelasha qashinka
2.1 Weelka jaallaha ah
2.2 Weelka buluuga ah
2.3 Noocyada weelasha qashinka: weelka cagaaran
2.4 Noocyada weelasha qashinka: weelka cawl iyo bunni
Dib-u-warshadayntu waa nidaam ujeeddadiisu tahay in qashinka loogu beddelo alaab cusub ama agab loogu talagalay isticmaalka xiga. Markaan si buuxda u adeegsanno howshan, waxaan iska ilaalin karnaa qashinka waxyaabaha suurtagalka ah ee waxtarka leh, waxaan yareyn karnaa cunnooyinka alaabta ceyriinka cusub, iyo dabcan isticmaalka tamarta cusub. Intaa waxaa sii dheer, waxaan yareeynay wasakheynta hawada iyo biyaha (iyada oo loo marayo gubista iyo qashin-qubka, siday u kala horreeyaan) iyo dhimista qiiqa lagu sii daayo.
Dib-u-warshadayntu aad ayey muhiim u tahay maxaa yeelay waxaa jira waxyaabo badan oo dib loo cusbooneysiin karo sida qaybaha elektaroonigga ah, qoryaha, dharka iyo dharka, birta birta ah iyo kuwa aan birta ahayn, iyo waxyaabaha ugu caansan sida waraaqaha iyo kartoonada, dhalooyinka, iyo caagagga qaarkood.
Dadka cusub iyo kuwa khibrada leh, laakiin wali su'aalaha qaarkood qaba, waxaa badanaa jira dhowr ololeyaal ama barnaamijyada waxbarashada deegaanka ee qashinka iyo dib u warshadeynta (sanadwalba) si kor loogu qaado wacyiga iyo dadka looga wacyi galiyo saamaynta deegaanka. Abuurista qashinka iyo tallaabooyinka ilaalinta deegaanka si loo yareeyo qashinka.
Ololahan ama barnaamijyadan waxaa inta badan fuliya Junta de Andalucía, Xiriirka Dawladaha Hoose iyo Gobollada Andalusia (FAMP), Ecoembes iyo Ecovidrio. Aad ayey muhiim u tahay inay dadku bartaan dib-u-warshadaynta, maxaa yeelay dad badan oo maanta ma yaqaanaan sida. in dib loo warshadeeyo wax kasta.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo weelal qashin ah waxaanan haynaa kuwa ugu waaweyn ee loo adeegsado in lagu xareeyo qashinka kala duwan iyadoo loo eegayo asal ahaan iyo sida uu ka kooban yahay. Aan aragno waxa ay yihiin:
Qof kasta oo inaga mid ahi wuxuu adeegsadaa in ka badan 2500 oo konteenar sanadkiiba, in ka badan kala badhna waxay ka samaysan yihiin caag. Waqtigan xaadirka ah Andalusia (oo waxaan ka hadlayey Andalusia maxaa yeelay waxaan ka imid halkan, aqoon fiican ayaan u leeyahay xogta), in ka badan 50% baakadaha balaastigga ah ayaa dib loo warshadeeyay, ku dhowaad 56% bir ah iyo 82% kartoonada dib ayaa loo warshadeeyay. Ma xuma! Hadda fiiri wareegga balaastigga iyo jaantus yar oo sawir leh halkaas oo aad ku arki karto arjiga koowaad oo aad isticmaali karto dib-u-warshadaynta.
Si loo dhammeeyo weelkan, waa in la sheegaa in qashinka aan la tuuri karin ay yihiin: warqad, kartoon ama weel quraarado ah, baaldiyo caag ah, alaabta carruurtu ku ciyaaraan ama kuwa wax laalaada, CD-yada iyo qalabka guryaha.
Talo soo jeedin: Ka hor inta aanad weelka ku dhex tuurin weelka, nadiifi oo simo weelka si aad u yaraato muggiisa.
Markii hore, waxaan aragnay waxa ku jira weelka, laakiin ma aanan arag waxa aan la gelin karin, kiiskan: Xafaayadaha wasakhda ah, maro jilicsan ama tuwaal waraaqo ah, dufan ama kartoon ama warqad dufan leh, aluminium bir ah, iyo kartoonno iyo armaajo dawo.
Warqad kasta oo cabbirkeedu dhan yahay (DIN A4) oo la dhigo lana soo celiyo, tamarta la keydsaday waxay u dhigantaa iftiinka laba nal oo 20-watt ah oo ilaaliya tamarta 1 saac. Sidaa darteed, waraaqaha iyo baakadaha dib-u-warshadeynta ayaa aad muhiim u ah.
Dib u warshadaynta hal tan oo xaashi ah, 12 ilaa 16 geed oo dhexdhexaad ah ayaa lagu badbaadin karaa, 50.000 litir oo biyo ah iyo in ka badan 300 kilogram oo saliid ah ayaa lagu badbaadin karaa.
Noocyada weelasha qashinka: weelka cagaaran
Mid ka mid ah noocyada ugu ballaaran ee loo isticmaalo weelasha qashinka waxaa loo isticmaalaa in dib loo warshadeeyo muraayadaha. Muraayadda 100% dib loo isticmaali karo waligeedna ma waayi doonto tayadeeda asalka ah. Dhalo kasta oo dib loo warshadeeyo, tamarta loo baahan yahay in lagu shido TV-ga muddo 3 saacadood ah ayaa la keydinayaa. Dib-u-warshadaynta muraayadda waxay u dhigantaa qiyaastii 8% (culeys ahaan) wadarta qashinka aan soo saarno.
Waxay ku qaadataa 4.000 oo sano dhalooyinka quraaradaha ah ee lagu aasay meelaha qashinka lagu shubo in la xaalufiyo ama gebi ahaanba la waayo. Si loo fududeeyo dib-u-warshadaynta, Xusuusnow inaad ku rido weel cagaaran oo aan lahayn dabool ama dabool, waana in lagu rido qashinka jaalaha ah.
Haddii aan ka soo baxno weelalkan oo aan isticmaalno weelka cawliga ah, sidoo kale waan yareyn karnaa oo si fiican ayaan u isticmaali karnaa walxaha dabiiciga ah, maxaa yeelay xitaa waxyaabaha dabiiciga ah waa la isku beeri karaa oo waxaa loo isticmaali karaa sidii nafaqo ahaan.
Noocyada weelasha qashinka: weelka cawl iyo bunni
Khaanadaha cawl waxaa loo yaqaannaa biin dhaqameed ugu dambayntiina waad iska tuuraysaa dhammaan qashinka aanad aqoon u lahayn sida loo kaydiyo. Si kastaba ha noqotee, waa inaad iska tuurtaa nooc ka mid ah qashinka maxaa yeelay waa hal weel oo dib-u-warshadeyn oo kale ah. Weelasha cawlan waxaa ka mid ah weelka ugu da'da weyn dhammaan weelasha qashinka lagu yaqaan. Waa weelka jiray ka hor inta aan la hirgalin inta kale ee haamaha dib u warshadeynta ah, waxaana lagu dalbadaa midab iyadoo la raacayo halka loo socdo iyo nooca qashinka. Maanta, dad badani waxay u haystaan ​​in weelka cawlku ku habboon yahay wax kasta oo aan ku jirin weelka intiisa kale. Tani sida iska cad maahan kiiska.
Kudaadin nooc kasta oo qashin ah kaliya xaqiiqda ah inaysan ku dhicin haamaha harsan waa qalad dhameystiran. Waxa jira noocyo qashin ah oo aan lagu dhex tuurin nooc kasta oo weel ah, xitaa cawdu kuma dhacdo. Qashinkaas waxaa caadi ahaan loogu talagalay nadiif ah dhibic. Waxa kale oo jira noocyo kale oo qashin ah oo haamo gaar ah u leh iyaga, sida kuwa saliida qashinka iyo baytariyada. Iyaga, waxaa jira weel gaar ah. Dhibaatada ka dhalan karta qashinkaas ayaa ah in haamaha loogu tala galay ay aad uga yaryihiin oo ay kala firidhsan yihiin.
Weelka buniga ah waa nooc ka mid ah weellada oo u muuqday mid cusub oo dad badani shaki ka qabaan. Waxaan hore u ogaanay taas weel jaalle ah waxaa jira weelal iyo balaastik, warqad buluug ah iyo kartoon, cagaaran dhalada iyo cawl ahaan qashinka dabiiciga ah. Weelkan cusub shaki badan buu keenayaa, laakiin halkan waxaan ku xallin doonaa dhammaantood.
Weelka buniga ah waxaan ku tuuri doonaa qashinka ka kooban maaddada dabiiciga ah. Tani waxay u tarjumaysaa inta badan haraaga cuntada aan soo saarno. Miisaanka kalluunka, miraha khudradda iyo khudradda, haraaga cuntada ee saxamada, qolofka ukunta. Qashinkaani waa kuwo dabiici ah, taas oo ah, iyagu iskood ayay u sii liitaan waqtigooda. Qashinka noocan ah wuxuu qeyb ka noqon karaa ilaa 40% wax kasta oo guriga ka baxa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto noocyada kala duwan ee weelasha qashinka ee jira iyo astaamahooda ugu waaweyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Noocyada weelasha qashinka
Sida Tamarta dhulka hoostiisa u shaqeyso